Vinten ထုတ်ကုန်များကို ၂၀၁၈ NAB ပြပွဲတွင်ပြသမည် NAB သတင်းများ | 2018 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Vinten ထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Vinten ထုတ်ကုန်များ
အဆိုပါ 2018 မှာ Display ကိုအပေါ် Vinten ထုတ်ကုန်များ NAB ပြရန်
အဆိုပါ 2018 မှာ NAB ပြရန်, Vinten ထုတ်လွှင့်ကင်မရာကိုထောက်ခံမှုစနစ်များသည်၎င်း၏ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုထက်ပိုရာစုနှစ်တစ်ခုနှင့်အတူ, Vinten ရဲ့ဆုရကင်မရာဖြေရှင်းချက်အဆုံးမဲ့ချိန်ခွင်လျှာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံး-In-class ကိုရွေ့လျားမှုအရည်အသွေးဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ Vinten ရဲ့အလိုလိုသိလက်စွဲစာအုပ်နှင့်စက်ရုပ်ဖြေရှင်းချက်ကင်မရာအော်ပရေတာကိုသူတို့ကအကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြု, တိကျအင်ဂျင်နီယာနှင့် Ergonomics ဒီဇိုင်းကထောက်ပံ့: ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့, ဖြတ်တောက်-အစွန်းပုံရိပ်ကိုဖန်ဆင်း၏။
နယူး Vinten မျက်နှာကျက် Track System ကို
ယင်း၏ NAB ပွဲဦးထွက်အောင် Tecnopoint စွမ်းအားဖြင့် Vinten ရဲ့ All-အသစ်ကမျက်နှာကျက် Track စနစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အစွမ်းထက်ပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန် Vinten ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့အောကျခံခုံ, အကြီးအကဲများ, နှင့်မြင့်ယူနစ်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကြမ်းပြင်အာကာသတစ်ဦးပရီမီယံမှာဖြစ်သည့်အတွက်ဖန်တီးမှုဘဏ်ဍာများအတွက်စံပြ, ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝ Vinten ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်ပေါင်းစည်းထားသည်။
ထို့အပြင် Vinten ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်, ထို Vantage ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစက်ရုပ်ခေါင်းကိုသို့ပေါင်းစည်းပုနှင့်အတူပိုကြီးတဲ့စတူဒီယိုတစ်ခုစံပြ flashcam ဖြေရှင်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် HD-VRC ဆော့ဖ်ဝဲ။ ထိုကဲ့သို့သောဝတ်ပြုရာရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အိမ်များအဖြစ်သေးငယ်စတူဒီယိုနှင့်သုံးစွဲသူများအဘို့, Vinten အဆိုပါμVRC [အသေးစား VRC] တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှု software ကိုဒီကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, modular ဗားရှင်းသေးငယ်ဘတ်ဂျက်ပွိုအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ကင်မရာများနှင့်မှန်ဘီလူး၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူဆုရ Vantage ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစက်ရုပ်ခေါင်းကိုမူတည်ပြီးမှခွင့်ပြုပါတယ်။
နယူး Vinten ပြင်ပမှန်ဘီလူး Drive ကို
Vinten လည်းယင်း၏ Vantage ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစက်ရုပ်ခေါင်းတစ်ခုပြင်ပမှန်ဘီလူး Drive ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ အခုအသစ်ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများ Vantage ဒယ်အိုး / tilt ဦးခေါင်းနှင့် တွဲဖက်. များတွင်အသုံးပြုသည့်အခါအပြည့်အဝ servo ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏လက်စွဲစာအုပ်မျက်ကပ်မှန်ကို upgrade နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြင်ပမှန်ဘီလူး drive ကိုမှန်ဘီလူး၏ 1-3 ဝင်ရိုး motorize နှင့် virtual reality အစုံအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သောကုဒ်သွင်းဒေတာများကိုပေးစွမ်းသည်ဤကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဖြေရှင်းချက်မှအစွမ်းထက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
"ဒီနှစ်မှာဖွင့် NAB ပြရန်ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး-In-class ကိုအရည်အသွေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့လက်စွဲစာအုပ်အထောက်အပံ့များနှင့်အတူ Vinten ရဲ့တိုးချဲ့စက်ရုပ်ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းနည်းများ, ဖေါ်ပြခြင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ သက်သေပြချက်ထုတ်ကုန်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ lineup ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်းနှင့်သူတို့ဖြတ်တောက်-အစွန်းအကြောင်းအရာကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ချောမွေ့အင်အားစိုက်ထုတ်ထိန်းချုပ်မှုများကို, စတူဒီယိုကနေအားကစားရုံကိုကိုးကွယ်၏အိမျတျောသည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖောက်သည်များကယုံကြည်စိတ်ချ၏။ "
- Ginny Grove, ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်မန်နေဂျာ Vinten
Vinten®တစ်ဦး Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်, ကို manual နဲ့စက်ရုပ်ကင်မရာထောက်ခံမှုစနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည် Vinten ရဲ့အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်အပေါ်အားကိုးနဲ့တကမ္ဘာလုံးနည်းပညာများနှင့်စျေးကွက်ကျယ်ပြန့်အဘို့အဖြေရှင်းချက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဝီလျံ Vinten, အ Vinten အမှတ်တံဆိပ်အားဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 100 ကျော်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနေဆဲကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အလွန်အမင်းဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်အစွန်းရောက်တိကျစွာ၎င်း၏တည်ထောင်သူလမ်းညွှန်အခြေခံမူအပေါ်အခြေခံသည်။ လက်စွဲအထောက်အပံ့များ, စက်ရုပ်အကြီးအကဲများ, အောကျခံခုံများနှင့် controller စပါဝင်သောထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံး-In-class ကိုအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, Vinten စတူဒီယိုနှင့်ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ပရီမီယံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ 80 ကျော်မှတ်ပုံတင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ Vinten ကင်မရာစစ်ဆင်ရေးအင်အားစိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကင်မရာအော်ပရေတာရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုလွှတ်ပေးခြင်း။ Vinten, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.vinten.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/180228Vinten.docx
တစ်ဦးမကြာမီကဖောက်သည်မှသည်နယူး Vinten မျက်နှာကျက် Track System ကို Install
Vinten Vantage စက်ရုပ်ကင်မရာဌာနမှူး
အဆိုပါ Vinten Vantage ဦးခေါင်းများအတွက်ပြင်ပမှန်ဘီလူး Drive ကိုအပြည့်အဝ servo ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးကို manual မှန်ဘီလူးကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်။
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20is%20set%20to%20unveil%20its%20all-new%20Ceiling%20Track%20system%20at%20the%202018%20%23NABShow%20-%20http://bit.ly/2ovzRvU%[အီးမေးလျ protected]
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2018 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း မျက်နှာကျက် Track System ကို ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ပြင်ပမှန်ဘီလူး Drive ကို NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် NAB16 nabshow Display ကိုအပေါ်ထုတ်ကုန်များ Vinten 2018-02-28
ယခင်: ပထမဦးစွာ SMPTE Specification ၏မူကြမ်းကယ်ယူမှရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအတွက် SMPTE နှင့်ပီပီပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ 2018 NAB Show မှာပြမျက်နှာပြင်ပေါ် Autoscript နှင့် Autocue ထုတ်ကုန်များ